Citizen JCB Prepaid Card - Myanmar Citizens Bank (MCB)
အထူး ခေါ်ယူအပ်ငွေ စာရင်း
What is Citizen JCB Prepaid Card?
Citizen Card ဆိုသည်မှာ e-commerce, Online Shop အစရှိတဲ့ online ငွေပေးချေမှုတွေအပြင် ပြည်ပတွင် ရှိသော JCB Logo လက်ခံတဲ့ ဆိုင်တိုင်းမှာလည်း သုံးစွဲလို့ရတဲ့ အသုံးအတည့်ဆုံး ကတ် ၁ ခု ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံပေါင်း ၁၉၀ ကျော်ရှိ JCB Logo လက်ခံတဲ့ ATM စက်များတွင်ပါ အသုံးပြုနိုင်သော ကတ် အမျိုးအစား ဖြစ်ပါသည်။
MCB JCB Prepaid Card ဖြင့် ပြည်ပတွင်ရှိသော Point of Sale (POS) စက်များတွင် အသုံးပြုခြင်း နှင့် online shopping, e-commerce အစရှိတဲ့ online ငွေပေးချေမှုများကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
သတ်မှတ်ထားသော JCB City Plaza Lounge များတွင် ဝန်ဆောင်ခမပေးရဘဲ နားနေနိုင်သည့် အခွင့်အရေး ရယူနိုင်ပါသည်။ (Japan, Korea, Thailand, Singapore, Hong Kong, Taipei, Hawaii(Honolulu), Los Angeles, Paris, Guam).
Hotels, Restaurants, Car Rental Services, Railways နှင့် Online Shop များ တွင် အသုံးပြုရာတွင် အထူး
Discount ခံစားခွင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။
MCB JCB Prepaid Card သည် Saving သို့မဟုတ် Current account နှင့် ချိတ်ဆက်ပြီးအသုံးပြုစရာမလိုသည့် Wallet အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ Customer သည် Bank Account ဖွင့်ရန်မလိုအပ်ပါ။
မှတ်ပုံတင် (မှုရင်း ၊ မိတ္တူ) (သို့မဟုတ်) Passport
ဓါတ်ပုံ ၁ ပုံ
ကတ်ဖွင့်ချိန် အနည်းဆုံးထည့်သွင်းငွေ – USD 20
ကတ်ထဲတွင်အနည်းဆုံးထားရှိရမည့်ငွေ – USD 20
* စာရင်း စတင် လျှောက်ထား သူသည် ကတ်စတင်ဖွင့်သည့်နေ့တွင် အသက် (၁၈)နှစ် ပြည့်ပြီး သူဖြစ်ရပါမည်။
ဘဏ်စာရင်းပိုင်ရှင်၏ အခြား လုပ်ငန်း ဆောင်တာများဖြစ်သော ကတ်စာရင်းလက်ကျန်ငွေသား စုံစမ်း ကြည့်ရှု ခြင်း၊ ကိုယ်ပိုင် PIN နံပါတ်ပြောင်းလဲခြင်း၊ Mini-Statement ထုတ်ယူကြည့်ရှုခြင်းများအား MCB ATM တွင် ဝန်ဆောင်မှုရယူနိုင်ပါသည်။ ပြည်ပရှိ ATM စက်တွင်လည်း ကတ်စာရင်းလက်ကျန်ငွေသား စုံစမ်း ကြည့်ရှုနိုင်သည့် ဝန်ဆောင်မှုရယူနိုင်ပါသည်။
ပြည်ပရှိ JCB အဖွဲ့ဝင်ဘဏ်များ၏ ATM စက်များတွင် လည်း ငွေထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
Card Joining Fee 10 USD
Lost/Replacement Fee 10 USD
Annual Fee5USD (1stYear Waived)
PIN Reset/ Reissue Fee No Charge
Payment at POS (Oversea) No Charge
Online Purchase No Charge
ATM Withdrawal Fee (Cross-Border) USD3+ Overseas Bank Charges
Balance Inquiry Fee at MCB ATMs No Charge
Balance Inquiry Fee at Overseas ATMs 0.5 USD
MCB JCB Prepaid Card ဘယ်လိုလျှောက်နိုင်ပါသလဲ??
MCB JCB Prepaid Cardအသစ်လျှောက်ရာတွင် NRC (သို့မဟုတ်) Passport, Passport Photo (1) ယူဆောင်ရန်လိုအပ်ပြီး Application Form တွင် ဖြည့်စွက်ကာ နီးစပ်ရာ MCB ဘဏ်ခွဲများတွင် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Card သည် Wallet အမျိုးအစားဖြစ်သောကြောင့် Saving သို့မဟုတ် Current account နှင့် ချိတ်ဆက်ပြီးအသုံးပြုရန်မလိုအပ်ပါ။
နီးစပ်ရာ MCB ဘဏ်ခွဲများသို့ ကဒ်လျှောက်သည့်နေ့တွင် ကဒ်အားချက်ခြင်းရနိုင်ပါသည်။
Oversea’s bank’s ATM တွင် ကတ်ညှပ်ပါက ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲ?
မိမိကတ်ညှပ်သည့် ဘဏ်အား ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားရပါမည်။
PIN number (password) သုံးကြိမ်မှားရိုက်ပြီး Locked ကျသွားပါက ဘာလုပ်ရပါမလဲ?
PIN number (Password) အဟောင်းကိုမှတ်မိပါက နီးစပ်ရာ MCB ဘဏ်ခွဲများသို့ ရုံးချိန်အတွင်း သွားရောက်၍ PIN reset ပြုလုပ်ရပါမည်။ သို့မဟုတ် MCB Helpdesk Number 01 2399663 သို့လည်း ဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားနိုင်ပါသည်။ PIN အသစ်အား ဖုန်းထဲသို့ SMS ပေးပို့မည်ဖြစ်ပါသည်။
PIN number (password) ကို မမှတ်မိလျှင် ဘာလုပ်ရပါမလဲ?
PIN reissue (PIN အသစ်) တောင်းရန် နီးစပ်ရာ MCB ဘဏ်ခွဲများသို့ သွားရောက်ရပါမည်။ သို့ မဟုတ် MCB Helpdesk Number 01 2399663 သို့လည်း ဖုန်းဆက် အကြောင်း ကြားနိုင် ပါသည်။
Oversea bank’s ATM တွင် ငွေထုတ်သည့်အခါ ငွေထွက်မလာပဲ အကောင့်ထဲမှ ငွေဖြတ်သွား သည့်အခါ ဘာလုပ်ရမလဲ?
နီးစပ်ရာ MCB ဘဏ်ခွဲများသို့ သွားရောက်ကာ ငွေပြန်လည်ထုတ်ယူရန် Request Form ဖြင့် တောင်းခံရပါမည်။
Email address ပြောင်းလဲလိုပါက ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ?
နီးစပ်ရာ MCB ဘဏ်ခွဲများသို့ သွားရောက်ပြီး Form ဖြည့်စွက်ကာ ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။
MCB JCB Prepaid Card လျှောက်ရမည့် ဘဏ်ခွဲနာမည်များကို ဘယ်လို သိနိုင်မလဲ?
ဘဏ်ခွဲများအားလုံးတွင် ကဒ်အား လျှောက်နိုင်ပါသည်။ ဘဏ်ခွဲ နာမည်များနှင့် တည်နေရာများကို သိရှိရန် https://www.mcb.com.mm/way-to-bank/branches-map/# သို့ သွားရောက် လေ့လာ နိုင်ပါသည်။
Balance inquiry ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ?
Balance inquiry အား MCB ATMs နှင့် Oversea’s ATMs တို့တွင် ကြည့်ရှုစစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။Oversea ATM များတွင် balance inquiry ပြုလုပ်ပါက USD 0.5 ကောက်ခံမည်ဖြစ်ပါသည်။
JCB Prepaid Card service တွေကဘာတွေလဲ?
Central Bank ၏ Regulation အရ MCB JCB Prepaid Card ဖြင့် ပြည်ပရှိ Point of Sale (POS) စက်များ ၊ E-commerce ၊ ATM စက်များတွင်သာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။